Jeequmsi Sudaan Kibbaa miilana furmaata argata laata?
Jeequmsi Sudaan Kibbaa miilana furmaata argata laata? Featured
Meeshaalee waraanaa waqliif baachuu
Qabeenya uumamaan, keessumaa albuudotaafi kuufama boba’an kan badhaate Sudaan Kibbaa, ummatasheef azaaba (si’ol) lafarraa erga taate waggoota saddeetii ol lakkoofsisteetti.Ummatni biyyattii samiirraa meeshaa waraanaan jalaan ammoo beela, dheebuufi aduu gammoojjiin waadamaa jira.Ummatni biyyattii miliyoonaan lakka’amu biyyaa kan baqate yoo ta'u, kumaatamni ammoo lubbuusaa dhabeera. Kanneen du’aafi baqarraa baraaramanis hongeefi dhukkuboota daddarboon dararamaa jiru. Qabeenyi egeree biyyaaf abdatamu daaraatti gederameera.
Kaleessarra har’atu wayya abdiin jedhu biyya kanatti biddeena abjuuti. Bakka tokkotti nagaan jira wayita jedhamu bakka birootti rasaasni akka rooba gannaa sagaleen meeshaalee waraanaa dacheefi samii uwwisee qaqqawweessa’a akka odeeffannoo Sudaan Tiribiyuunirraa argame ibsutti. Yaaddoon ummata biyyattii guyyaadha gara guyyaatti dabalaa dhufeera. Mirgi jiraachuufi jiruu ofii gaggeeffachuu biyyattii tasumaa kan yaadamu miti.
Nageenya biyya kanaa mirkaneessuuf biyyootni addunyaa jaarsa araaraa hin ergin muraasa, dhaabbileen idila addunyaa hedduunis qooda fudhataniiru. Garuu rakkoon nageenya biyyattii akka ibidda daaraan aguugamee bulee holotaa har’a ga’eera. Jaarmiyaaleen siyaasa biyyattii kudhan ijaaranii kudhan diigu,waliigalteen dhukaasa dhaabuu ganama yoo mallattaa’e galgala sagalee meeshaalee waraanaa dhaga’uun barsiifata ta’aa dhufeera. Dhiyeenya kana waliigalteen dhukaasa dhaabuu mootummaa biyyattiifi riphe loltoota gidduutti magaalaa Finfinneetti mallattaa’ee ture furmaata waaraa fida jedhamee abdatamee turus osoo qalamni waraqaa waliigalteerraa hin qoorin wal waraanuun itti fufuunsa addunyaa daran gaddisiiseera.
Yaa’ii Gamtaa Afiriikaa torban kana taasifamaa jirurrattis rakkoon nageenya biyya kanaa ajandaa guddaa ta’eera. Dhimmuma kana ilaalchisee Wiixata darbe Ministeerri Dhimma Alaa gaazeexessitootaaf ibsa kennee ture. Dareektarri Olaanaan Dhimmoota Afiriikaa Anbaassadar Mahaammad Diriir akka jedhanitti, rakkoo Sudaan kibbaa olaantummaan ‘IGAD’ kan ilaallatu ta’us deggersa hawaasa idila addunyaa kan barbaadudha.Yaa’iin Gamtaa Afiriikaa miilanaas waliigaltee waraana dhaabuu garee finciltootaafi loltoota mootummaaf furmaata waaraa taasisa jedhamee eegama.
Haaluma walfakkaatuun ministeerichatti Gorsaa Dhimma Siyaasaa kan ta’an Anbaasaaddar Firee Tasfaamikaa’el akka jedhanitti, nageenyas ta’e rakkoo nageenyaa Sudaan Kibbaa kallattiin biyyoota ollaashii kan fayyaduufi miidhu waan ta'eef ‘IGAD’ irraa hojii guddaatu eegama. Kana jechuun shoorri dhaabbileen idila addunyaa hin barbaachisu jechuu miti. Haaluma kanaan anbaasaaddaroota biyyoota michuu ‘IGAD’ ta’an waliin marii taasifameen waliigalteen dhukaasa dhaabuu kanaan dura mallatteeffame cabuunsaa isaan gaddisiisus waliigaleen kun hojiirraa akka ooluufis biyyootni kunneen dhiibba gama maraan kan taasisan ta’a.
Waliigalteen dhukaasa dhaabuu cabuu kan dandada’e hojiin hubannoo uumuu gaaraa hanga gadiitti taasifamuu dhabuusaan ta’us kan miilanaa waanti adda taasisu hojii hubannoo bal’inaan uumuun alatti gartuu waliigaltee mallattaa’e diiguuf carraaqurratti tarkaanfii jabaan kan fudhatamu ta’a. Akka waliigaltee miilanaa kanatti bakka buutonni gartuu lameenii hirmaataniiru. Akka kanaan duraa loltuun eeyyama malee biyya sana keessa socho’uun dhorkaadha. Dhimma kanaafis ‘IGAD’ xiyyeeffannaa guddaa kennuun kan hojjetu ta’a. Gamtaan Afiriikaafi Awurooppaas tattaaffii nageenya biyya kanaa bakkatti deebisuuf taasifamu keessatti hirmaannaa cimaa akka taasisan waadaa seenaniiru.
Walumaagalatti, waliigalteen miilanaarraa bu’aan addaa argamuu qaba. Biyya waraanaan bututte kana nageenya waaraa gonfachiisuuf sochiin taasifamu jajjabeessaadha. Ta’us furmaata waaraan argamuuf argamuu dhabuun fuulduratti waan ilaallu ta’a.
Torban kana/This_Week 12414
Guyyaa mara/All_Days 1821834